Madaxweyne Farmaajo oo Maanta ku wajihan Magaalada Gaalkacyo – STAR FM SOMALIA
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta ku wajihan Magaalada Gaalkacyo
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmahaan socdaal ku maraya gobolo ka tirsan dalka ayaa laga sugayaa deegaanada Galmudug.
Madaxweyne Farmaajo ayaa socdaal dhulka ah ku tagay magaalooyinka Qardho iyo Boosaaso, waxaana la filayaa inuu tago magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Waxaana kadib la qorsheynayaa inuu kaga sii gudbaa deegaanada Galmudug oo diyaar garow xoogan uu ka socdo.
Magaalada Dhuusomareeb iyo magaalooyin kale oo Galmudug ka tirsan ayaa waxaa laga dareemayaa diyaar garowga dadweynaha iyo maamulkaba ay sameynayaan si ay usoo dhaweeyaan madaxweynaha dalka.
Madaxweynaha Galmudug iyo madaxa xukuumadda Galmudug ayaa dhankooda shaaciyay inay diyaar garow ugu jiraan sidii ay usoo dhaweyn lahaayeen wafdiga madaxweynaha Soomaaliya.
Ciidamada Kumaandooska Ayaa Sheegay in ay Burburiyeen Saldhig Alshaab ay Kulahaayeen Shabeelada Hoose